Ukuqala kweNkqubo yeeDummies Cheat Sheet
Ukuba usaqala ukubhala iinkqubo zekhompyuter, landela ezi zikhokelo ziluncedo ukwenza inkqubo esebenzayo. Yazi ulwakhiwo oluqhelekileyo oluqhelekileyo, ulwakhiwo lwesebe, kunye neesimboli zomsebenzi wemathematics ukwenza inkqubo yakho yenze imiyalelo ethile.
Iingcebiso zokuBhala iiNkqubo zeKhompyuter
Xa ukulungele ukubhala inkqubo yekhompyuter, gcina ezi ndlela-kwiingcebiso malunga nenkqubo ukuze inkqubo oyenzileyo ibe nemiyalelo ecacileyo yekhompyuter yokwenza imisebenzi ngokufanelekileyo:
Sebenzisa amagama ahlukileyo achazayo.
Sebenzisa iintlobo zeedatha ezifanelekileyo.
Bhala iinkqubo ekulula ukuzifunda nokuziqonda.
Sebenzisa ii-algorithms ezilula kunye nolwakhiwo lwedatha xa kunokwenzeka.
Nika ingxelo ngenkqubo yakho ngokukhululekileyo. (Okanye, njengenye indlela, yenza ikhowudi yakho icace kwaye ifundeke lula ukuba awudingi zimvo kwasekuqaleni.)
Bhala iinkqubo eziziimodyuli ngokwahlula-hlula inkqubo enkulu kwiinkqubo ezincinci ezizahlulayo omnye komnye.
Iimeko zomda wovavanyo ngokunika inkqubo yakho ephezulu kakhulu kunye namanani asezantsi kakhulu.
Khetha ialgorithm elungileyo kunye nolwakhiwo lwedatha yenkqubo yakho.
Susa yonke imiyalelo engeyomfuneko okanye izinto eziguquguqukayo.
Yenza inkqubo yakho isebenze kuqala; ke ukhathazeke ngokulungiselela inkqubo ukuyenza incinci kwaye ikhawuleze. Khumbula ukuba inkqubo ecothayo, edumbileyo esebenzayo iyakhethwa kwinkqubo encinci, ekhawulezayo engasebenziyo.
Ulwakhiwo oluqhelekileyo lweNkqubo yeKhompyuter
Imiyalelo ephambeneyo, olunye lwezinto ezisisiseko kulungelelwaniso lweekhompyuter, xelela ikhompyuter ukuba iphinde enye okanye engaphezulu imiyalelo. Jonga olu luhlu lwezinto ezisisiseko zelog kwiinkqubo ezahlukeneyo zeekhompyuter kunye neelwimi:
Ulwakhiwo oluqhelekileyo lweSebe kwiNkqubo yeKhompyuter
Izakhiwo zesebe zenza ukuba iinkqubo zakho zekhompyuter zisebenzise imiyalelo eyahlukeneyo ngokuxhomekeke kwixabiso ledatha ethile. Izakhiwo zesebe, njengalezi zidweliswe ngezantsi, vumela ikhompyuter yakho ukuba isebenze ngokufanelekileyo ngokwamkela nokusabela kwidatha engaphandle.
i-polymyxin b sulphate kunye nesisombululo se-ophthalmic ye-trimethoprim
AbaSebenzi abaqhelekileyo beMathematika abasetyenziswa kwiNkqubo
Kwinkqubo yekhompyuter, iindlela ezine ezisisiseko zisetyenziselwa ukuphatha amanani: ukongeza, ukuthabatha, ukuphindaphinda, nokwahlula. Ukwenza ukusebenza kwezibalo ngamanani amabini (okanye amanani amabini amelwe ngokuguquguqukayo), sebenzisa ezi mpawu kwinkqubo yakho yekhompyuter:
Icandelo / (phambili slash)
Icandelo elipheleleyo (umva umva)
yintoni i-losartan potassium
norethindrone 5mg iziphumo ebezingalindelekanga
Ngaba i-tylenol kunye ne-aleve zinokuthathwa kunye
yintoni i-ammonium lactate
kukukrala kwinyonga ngaphandle kwesizathu